Qubsuma koo 12: 'Shirrishirrii ayyaana waggaan yaada' - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma koo 12: 'Shirrishirrii ayyaana waggaan yaada'
4 Muddee 2017
Dr Firehiyoot Wandimmuun jedhama. Anis abbaan warraashii Dr Teediroos Akliiluun jedhama. Gara Ameerikaa kan dhufne waggoota jahaan dura carraa barnootaa argannetti fayyadamuun ture.
Dursa carraa barnootaa kan argatte haadha warraa koo Firee turte. Anis ergan akka maatiitti ishee waliin dhufeen booda carraan naaf milkaa'uun iyyanni barnootaa koo fudhatama argate. Achiinis barnoota eegale.
Isaan boodas lamaan keenyaa baatii Hagayyaa fi Caamsaa bara 2009 Yunivarsitiidhaa sadarkaa doktarummaatiin eebbifamne.
Wayita ammaa kanattis lamaan keenyayyuu magaalaa Wiichiitaa keessatti ogummaa barsiisuu fi kan gara biraatiin hojii argachuun dhaabbilee gaarii keessa hojjachaa jirra.
Kan jiraannus asuma Isteetii Kaansaasaa magaalaa Wiichiitaa keessa. Erga garana dhufne reefu baatii lama qofa.
Lafa duraan jiraachaa turre Niiyoork siitiin sochiileen daldalaa keessatti waan baayyatuuf Markaatoo na yaadachisa ture. Jireenyaafis magaalaa baayyee mijataa ture.
Haa ta'u malee, haalli qilleensaa ishee baay'ee cimaa ture. Siiraakiiyuus lafa Ameerikaatti cabbiin itti cimu keessaa tokkoodha. Waggaattis ji'oota jahaa hanga torbaa cabbiin hindhabamu. Jiddu galaan hanga inchii 100 ( cm 200) cabbii waan roobuuf baayyee qorra ture.
Fireewooti: Ani osuma hojjachaa barannuu mucaa dhiiraa tokkoo fi dubara takka waan godhanneef, isaan kunuunsaa kana hunda raawwachuun bara cimni keenya itti qorame ture.
Yeroo sanattis ijoollee keenya gara wiirtuu keessa turmaataa geessuuf humna waan hin qabaanneef, lamaan keenya haala mijeessuun dabareen kunuunsaa turre.
Teediroos: Ani waldaa lubummaanan tajaajila. Guyyaa mucaan keenya lammataa dhalattus waldaan itti tajaajilutti sirna kabajaa kan waggaatu ture.
Tajaajiltoonni duraan waliin tajaajilaa turrees sababii adda addaatiin waan hintureefu, ittigaafatamummaan hundu ana irra ture. Jala bultii ayyanichaatti Fireen ciniinsuun qabamtee hospitaala galte.
Manoonni dhiheenyaa hundi sirnicharra waan turaniif namuu mana hin turre. Eenyu akkan waamun wallaalee. Isheenis sa'aatii 10 irratti hiikamnaan namootaan adaraa jechuun dhiisee gara waldaa deeme.
Booda irras, hariiroon keenya baay'ee cimaa waan tureef, Itoophiyaanoonnii fi Eritiraannoonni deddeebii'uun sirriitti kunuunsanii kaasan. Mucaa keenyas guyyaa sanaan 'Arseemaa' jechuun moggaafneera.
Erga gara lafa amma jiraannu Wiichiitaa dhufnee kan dhabne, ijoollee fi Fireen hiriyoota bira jechuun bakka dhaqan dhabu isaanitti. Hiriyyota Niiyoork jiraatan baay'een qaba ture.
Gama ijooleetiin haala danda'ameen afaan biyyaa manatti barsiisuuf ni yaalla. Kan mana qofaatti ta'u hin jiru, ollaan afaan keenya dubbatu osoo jiraate caalaa gaarii ture. Isaanis hiriiyoota isaanii magaalaa duranii sana yaadu. Ollaadhaan waan wal hinbarreefis baay'ee na yaachisa.
Waanan biyyaa yaaduuf tokkos dhimmuma kanaaf. Osoo biyya ta'ee bakka warri hinjirreetti firrii hindhabamu ture.
Kan biraa hafee nyaata biyyaa argachuuf mataasaa yoo xinnaate sa'aatii lama konkolaataa ofuu qabda.
Kanaafu filannoon qabnu buddeena manatti tolchuudha.
Kanaan alatti ruuzii kuduraa fi foon waliin sooranna. Fireen caalaa yoo kuduraan tolfame jaalatti.
Ani garuu nyaachuun waan narra jiraatuuf malee buddeenan jaaladha. Kanaafuu gogaa ta'ulleen manaa hin dhabamu.
Siriiyyu hojii galuun guyyaa guyyaan nyaata qopheessuun waan nutti ulfaatuuf, yeroo tokkoon kan guyyaa sadii hanga afurii ta'u qopheessina. Nyaata akkasiif immoo buddeen baayyee tola.
Yoo baayyisuu baannees, paastaa, ruuzii, kuduuraa, qorxummii fi waaddii gara biraa ni hojjanna.
Itoophiyaadhaa kanan hawwuu:
Ani luba waanan ta'eef, yeroon Itoophiyaa jiru sagaleen sirna kadhannaa fi sagalee bilbila waldaa dhagahaa ture sanan yaadadha. Sababiin isaas biyya Ameerikaatti waan akkasii hinjiru.
Wanti biraa asitti akkan biyya koo yaadadhu na taasise jira. Innis yeroo jalqabaatiifan biyyoo diimaa Okilhaamaatti argee, safara koo Finfinnee Gullallee natti fakkaate.
Fireewoot: Kan biraa ammoo manneen Niiyoorki keessa jiran kammiyyuu dallaa hin qaban. As lafa amma jirrutti ammoo akka biyyaatti dallaa ol dheeraa ta'u baatuus, manneen baayyeen dallaa mukaa qabu. Kunis safaraa koofi baaddiyyaa na yaadachiisa.
Hunda caalaa kanan yaaduufi kan ijjarra na deemu, miiraa ayyaana waggaa fi shirriisuu ayyanichaaf torbaniin dura taasifamu, walitti qabamuu ollaafi firootaa sanan yaada.
Manni keessa jiraannu kan fakkaatu siif ibsuuf:
Manni keessa jiraannu daawitii heddu qaba. Isa keessanis gamatti kan ilaallu dirree magariisa gamoowwan jidduun mul'atuudha.
Ijoolleen keenyas achiitti xabatuu. Adurreefi sareen illeen itti bashannanu. Ijoolleen keenyas kanneen fa'ii ilaalaa bashannanu.
Osoo waan hunda geeddaruuf humna qabaannaa ta'ee, haadha keenya dhihoo kana du'aan dhabne lubbuun hambiisuuf waan tokko raawwanna ture. Yeroo rakkiisaa kanattis maatii keenya waliin taana turre.
Lammiileen Wiichiitaa baayyees nu beeku baatanis, yeroo gaddaa keenyaatti nu waliin ta'uun nu jajjabeessu isaaniif ni galateefanna.
Qubsuma koo 11: 'Biyya Ingiliizitti kophummaan namoota hedduu dhukkuba sammuuf saaxila'
27 Sadaasa 2017
Qubsuma Koo 10: Kanan hawwu hunduu jaalalaafi kabajaan waliin akka jiraatuufi
20 Sadaasa 2017
Masaraa mootummoota Itoophiyaa keessa maaltu jira?
Ministirri Dhimma Alaa Somaalee duraanii ajjeefaman
Finfinnee daangessuu dhabuun hojii buqqaatota gargaaruu danqe
Godina Gujii Gooroo Doolaatti namoonni 10 ajjeefaman
'Killee saantima 20'n daldala eegale'
Faayidaan 'MRI' maali?
Barreessaa beekamaan Keeniyaa du'e
Ulfa baasuun hafuu hin qabu jechuun US'tti hiriirri ba'ame
Yakkamaa waraanaa Somaaliyaa Varjiiniyaatti taaksii oofu